Ukuhlaselwa kwe-angina kwenzeka ngokunciphisa iinqwelo ezifakwe kwiiplates ze-atherosclerotic, ngenxa yoko i-oksijeni encinci ingena kwi-heart muscle, yinto ethile ye-ischemia. Phantse kwisiqingatha seyure isigulane sibuhlungu, esinikwe engxeni yesobunxele kunye nehlombe elingasekhohlo, umva wokuxhatshazwa, okubangela ukwesaba ukufa. Kule nqaku siza kuqwalasela izilwanyana zabantu ukuze unyango lwe-angina pectoris.
Amanyathelo okulungisa abantu ngesifo.
Rosehip ne hawthorn.
Ukunyanga kwesi sifo kunenye iresiphi ethandwayo - sebenzisa i-decoction ye-dogrose ne-hawthorn. Ukulungiselela nokusetyenziswa: thabatha izityalo eziphambeneyo (malunga neetlanu zezipuni ze-hips kunye ne-ten hawthorn), zizalise kwisikhwama, uze uthele iilitha ezimbini zamanzi abilayo, unxininise kwindawo efudumeleyo iintsuku ezimbini, uze ungene ngaphakathi kwaye ungene ngaphakathi, ngaphambi kokutya, kathathu ngosuku, 200 ml nganye.
I-Hawthorn kunye nomama.
Kwakhona ucebise ukusebenzisa i-decoction ye-hawthorn ne-motherwort. Ukulungiselela: uthathe iipunipoli ezithandathu (ezigcweleyo) kunye nomlinganiselo ofanayo wezithelo ze-hawthorn, uthele iikomityi ezisixhenxe zamanzi abilayo kwaye uvumele ukuba zifake kwindawo efudumeleyo, kuqala zihlanganiswe ngetileni, zingadlulanga iiyure ezingama-24, zize zikhuphe. Umhluzi kufuneka ugcinwe kwifriji. Indlela yokusebenzisa le nyilisi: kufuneka ithathe iglasi 1, kathathu ngosuku, ungabi mnandi. Ukuphucula intle yomhluzi, unokuxuba kunye nomhluzi we-dogrose.
Garlic, ujoni kunye nemon.
Ukuze unyango lwe-stenocardia, umxube wegalikhi, ubusi kunye nemon. Ukulungiselela: ngokusebenzisa inyama yokugcoba inyama, kufuneka udwebe iilom ezilishumi ezingahlambulukanga uze ungeze iigrafu ezi-10 ezigayiweyo (ukuba zingadityaniswa kunye neengcezu), zixutywe neyure enye. Gxotha umxube uze uyifake kwisitya esivaliweyo. Makhele iiveki. Thatha amathispuni amane omxube imihla ngemihla - kanye ngosuku. Ukusela kuyimfuneko, kungekhona ukukhawuleza, ukuxuba umxube. Unyango luqhubeka ngeenyanga ezimbini.
IiCermes zemon, eziqulethe ixabiso elininzi leoli, zibalulekile kwizigulane ezine-angina pectoris. Kufuneka ufune ukuhlamba iipelisi ze-lemon - inceda kakhulu.
Xa unyango lwe-angina pectora, i-curd isetyenziswa kwakhona. Kucetyiswa ukuba udle ubuncinane igramu ezili-cottage shizi ngosuku.
Impembelelo enamandla kakhulu yeyeza kunye ne-stenocardia inikezwa ngobusi bemibala. Isicelo: thabatha ubusi ngamanani amancinci, iisipuni enye, kabini ngosuku, kunye neti, ubisi, iziqhamo okanye i-cottage cheese.
Ukunyanga kwesi sifo kusetyenziswa ukunyuka kwamaqabunga e-oregano, okuthi, ngaphezu kweyonyango, inefuthe kunye nefuthe. Ukulungiselela nokusetyenziswa: enye ipoyiyo yezinto eziphathekayo zokwelapha zityhila iglasi yamanzi ashushu kwaye zivumele ukuba zibalele iiyure ezimbini. Thatha ngaphakathi ngaphakathi, isipuni 1, kathathu ngosuku.
Ukuxhamla kwe-pig powder isetyenziswe kunyango lwe-angina pectoris - linciphisa iziqulatho zemiqobo yezinhliziyo. Isicelo: kufuneka utyhale iipunipoyi ezimbini zeengcawa zeengcawa ngeglasi yamanzi abilayo kwaye ubeke umlilo obuthathaka. Ukufudumeza kumanzi okuhlambela ngamanzi imizuzu elishumi elinesibini kunye nesitya sokuvalwa. Emva koko kufuneka upholise kwaye unciphise ukumnika. Emva koko faka amanzi kumgangatho wokuqala. Thatha kanye kanye ngosuku ngekota yeglasi. Kwifriji, ukumanyelwa kugcinwa kungekho ngaphezu kweentsuku ezimbini.
Xa unyango lwe-angina pectoris, kunye nokuphazamiseka kwentliziyo, ukunyuka kweentyantyambo zeMay lily of the valley isetyenziswe. Ukulungiselela nokusetyenziswa kweli xesha: kufuneka udlulise iglasi yamanzi atshisayo ipofile yezinto eziphathekayo kwaye uvumele ukuba ibhalele ihora. Thatha ngaphakathi, kathathu ngosuku, kwikota yeglasi. Indlela yokwenza i-tincture: ukufaka kwiibhoksi zokusetyenziswa kwebhotile (ukusa kwisiqingatha), ngokuqinileyo, kufuneka udlulise ibhotile phezulu kunye ne-45% yotywala okanye i-vodka. Faka kwindawo epholileyo kwaye ubambelele iintsuku ezilishumi. Thatha imihla ngemihla ukuya ezintlanu ukuya kweeshumi elinesibini ze-tincture efunyenweyo.
Umngxuma we-ash ash.
Xa i-angina pectoris icetyiswa ukuthatha i-decoction. Kubalulekile ukuthatha isiqingatha ilitha lamanzi kwaye uzalise ngamagremu amabini enqabileyo, ubilise ihafu yesure. Makhele kwaye uthathe kathathu ngosuku, isiqingatha seyure ngaphambi kokutya, esinye isipuni.
Ingcambu ye-elecampane iphakamileyo.
Ukuze unyango lwe-angina ne-cardiosclerosis, kucetyiswa ukuba uthathe ingcambu ye-elecampane. Ukulungiselela: engeza iigragram ezingamashumi amathathu zomhlaba otyumkileyo we-elecampane ingcambu kwisitha esiqingatha se-vodka, kwaye uvumele ukuba ibhalele iintsuku ezilishumi. Thatha amaconsi angama-30-35, kathathu ngosuku.
Ukunqunyulwa kweentyantyambo ezisezantsi zearabillar isetyenziselwa unyango lweentliziyo kunye nezifo ze-vascular. Ngoko, kufuneka uthele iglasi yamanzi enye yeglasi yeentyantyambo, uze ubilise imizuzu emihlanu, kwaye ke uvumele ukuba ibenze, ipholile kwaye iyancipha. Thatha umhluzi obangelwayo iintsuku ezimbini, usele izidlo ezintandathu.
Ukuba ukuhlasela okungalindelekanga kwe-angina kwenzeka, kwaye akukho dokotela kufuphi nawe, khumbula: valocordin, uValidol noCorvalol abanakukunceda. Kubalulekile ukuthatha i-nitroglycerin, echitshiyayo kakuhle. Iza kuphumla kwiindonga zeemithana yegazi, yandisa i-lumens, kwaye intliziyo "iyicinga" yokuba i-oxygen ayikho. Thatha umgaqo wokuhlala ube ne nitroglycerin nawe. Ukuba iintlungu ziya kukukhathaza emva kwemizuzu engamashumi amabini emva kokuthatha i-nitroglycerin, inokuthathwa njengempawu ezifana ne-infyoction ye-myocardial. Kule meko, kufuneka ufune ngokukhawuleza uncedo kwiingcali.
Uphuhliso olusebenzayo lwe-angina
Ukunyanga isithende siphucula indlela yabantu
Umphumo we-mint kunye ne-lemon balm kumntu
Izindlela zokucoca amathumbu avela kwi-slags ngaphandle kwe-enemas
Uthando kunye nobudlelwane bomtshato
Ukugaya i-cellulite ekhaya
Ukulahleka kweenwele emva kokunikezelwa kunye nokuhlaselwa
Ukulahlekelwa kwesisindo ngendlela yeSemenov
Eyona ndlela ibhetele ngokumelene ne-cellulite